> Resource > jailbreak > Sida loo JAILBREAK 5c iPhone
Sidaas aad go'aan ku gaaray in JAILBREAK aad 5c iPhone laakiin aanad garanayn sida loo. Tutorial waxaa loogu talagalay adiga. Ilaa maqaalkan, waxaan ku sharixi doonaa talaabo talaabo sida loo JAILBREAK 5c iPhone ah. Waxaan u tegayaa inaan isticmaali evasi0n 7 loogana in JAILBREAK. Waqtigan xaadirka ah, waa software keliya ee awood u jailbreaking qalab kasta Apple socda ee macruufka 7.
Waxaad ka hubsan kartaa version of macruufka aad iPhone waxaa socda by socday goobaha> guud> ku saabsan iyo hoos u dhaqaaq version. Laakiin haddii aad leedahay 5c iPhone ah, aad socda macruufka 7 ama ka sare.
Ka hor inta aanan bilaabin in sharxaya habka of jailbreaking, waa in aad iyo gurmad waa iPhone 5c. Waxaa muhiim ah in aad sidaas u samayn, sababtoo ah haddii wax qaldamaan inta ay socoto jailbreaking ka evasi0n 7, waxaad had iyo jeer soo celin kartaa 5c iPhone iyo dib dhamaan xogta (xiriirada, sms, sawiro ...) ku yiil qalab aad. Waxaa jira 2 siyaabo in ay dib u aad 5c iPhone, mid ka mid ah hore waa in ay si toos ah u samayn ka iPhone by siyoodba saldhigyada> iCloud> Kaydinta & kaabta iyo garaac "Back Up Hadda". Habka labaad waa iyada oo la isticmaalayo Lugood on your computer, xirmaan 5c iPhone ah in aad damisid, u furan Lugood, guji badhanka iPhone, ee bogga kooban, guji "dib Up Hadda".
Hadda wax walba waa diyaar, aynu boodi ee muhimka ah ee mowduuca. Halkan waxa ku jira qaybaha kala duwan ee habka evasi0n 7, inkastoo aan isticmaali doonaa version Mac of software sida tusaalaha, version daaqadaha waa isku mid.
Talaabada 1: habayn ka iPhone 5c haddii ay jirto saar hal
Talaabada 4: Isku aad 5c iPhone in aad Mac
Talaabada 6: Unlock aad 5c iPhone oo guji evasi0n 7 app
Talaabada 1: habayn ka 5c iPhone saar haddii ay jirto mid ka mid
Fadlan gab habayn ku saabsan 5c iPhone haddii aad mid ka mid ah. In sidaa la yeelo, ka screen guriga aad 5c iPhone, garaac Settings General habayn ku xafido On leexo habayn Off
Connect aad 5c iPhone in aad Mac la cable USB / iftiiminta ay bixiyeen la telefoonka.
Evasi0n 7 ogaan doonaa 5c iPhone iyo xusuusanayaa version firmware macruufka oo la socda. Riix badhanka JAILBREAK ah u bilowdo hawsha.
Talaabada 6: Unlock aad 5c iPhone iyo guji evasi0n 7 app
Marka nidaamka dhamaato, waxaad heli doontaa fariin ku war aad in lagu furo aad iPhone. Fadlan furo aad 5c iPhone iyo guji evasi0n 7 app. Sidoo kale, ha la xidho ee evasi0n 7 software on your computer, sida habka jailbreaking waa weli dhammayn.
The screen iPhone tegi doonaa madow oo ka dibna waxa reboot doonaa ahaantiisa, ma noqon walwal maadaama ay tani waa iska caadi. Marka iPhone leeyahay reboot, waxaad arki doontaa app Cydia telefoonka ah, aad si guul leh jailbroken ayaa aad 5c iPhone.
Si Mudanayaasha Cydia, guji kaliya app hal mar oo si toos ah laftiisa initialize doonaa. On furitaanka hore, app reboot doonaa 5c iPhone ka dib samaynta. Ka dib markii rebooting, kaliya mar kale ka jaftaa on app Cydia ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda weyn in aadan heli doonaa app dukaanka Apple.